ဥရောပမှာတော့ခရီးသွား၏အမြန်ဆုံး Mode ကိုဆိုတာဘာလဲ? | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဥရောပမှာတော့ခရီးသွား၏အမြန်ဆုံး Mode ကိုဆိုတာဘာလဲ?
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 18/02/2020)
သငျသညျဥရောပမှာခရီးသွားများ၏အမြန်ဆုံး mode ကိုအဘယျစဉျးစားမိသည့်အခါလူတွေထင်ပထမဦးဆုံးအရာပျံသန်းနေသည်. ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့သဘောမတူမယ်လို့! အမှန်တကယ်ပျံပိုမြန်စေခြင်းငှါနေစဉ်, လေဆိပ်သင်အမှန်တကယ်ကယ်တင်ခရီးသွားအချိန်ပမာဏကိုကန့်သတ်ခြင်းထက်နှေးကွေးဘာမှမရှိဘူးင်. သငျသညျကလေဆိပ်ဖို့ကြာ drive ကိုအတွက်ဆခွဲကိန်းတစ်ချိန်ကဒါဟာအစကပိုစျေးကြီးဖြစ်ခြင်းတက်အဆုံးသတ်, လွန်း! ပင်ကိုသိပ်သည်းလမျးပျေါတှငျစတင်ရန်မနေပါနဲ့, အပိုင်းကအရမ်းကိုကြီးမားဆိပ်ကမ်း, အဆိုပါ interminable လိုင်းများအတွက်စစ်ဆေးနှင့်လုံခြုံရေးရှောက်သွား, နှင့် အထုပ်အပိုး ဆိုက်ရောက်အပေါ်သို့ပြောဆိုချက်ကိုနှောင့်နှေးအားလုံးတက် add!
ကျနော်တို့ဘတ်စ်ကားခရီးသွားတစ်ဦးမျှမကြောင်းအားလုံးသဘောတူနိုင်မထင်! သင်ရထားနှင့်အတူရသက်သာခြင်းကြောင့်နှိုင်းယှဉ်အထူးသဖြင့်လာသောအခါ. ဥရောပမှာခရီးသွားများ၏အမြန်ဆုံး mode ကိုသေးသည်အဘယ်အရာအကြောင်းကိုသေးယုံကြည်မဟုတ်? အပေါ် Read!
ဘရပ်ဆဲလ်မှာရှိတဲ့ခရီးသွားများ၏အမြန်ဆုံး mode ကိုကဘာလဲ:
ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခု ဘရပ်ဆဲလ်ကနေခရီးသွားလာ ရထားဖြစ်ပါသည်. လက်မှတ်တွေကိုဝှကျထားအခကြေးငွေမရှိဘဲမိနစ်ပိုင်းအတွင်းကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားကတဆင့်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်နိုင်ပါသည်. ဘရပ်ဆဲလ်နဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဗိသုကာ နှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်သမိုင်းခပ်သိမ်းသောလမ်းနှင့် alleyway သို့ထုပ်ပိုး.
ဘရပ်ဆဲလ်အမှန်တကယ်လူတိုင်းအတွက်တစ်ခုခုရှိပြီးယင်းသို့ပိုပြီးအတူအနုပညာနှင့်ဗိသုကာအဖြစ်ဥရောပအဓိကကမ်းလှမ်း ပုံမှန်မဟုတ်သောဆွဲဆောင်မှု. သင်တစ်ဦးအစားအသောက်များတွင်အပေါ်များမှာလျှင် fries အဖြစ်ဘရပ်ဆဲလ်သွားရောက်ကြည့်ရှုမနေပါနဲ့, ဂုံး, နှင့် ဘီယာ မကြာမီသင်သည်ကျူးလွန်ရပါလိမ့်မယ်. ဘရပ်ဆဲလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကြောင့်လည်းစူပါင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ ရထားသုံးစွဲနိုင် နှင့်သင်အလွယ်တကူလျင်မြန်စွာဥရောပအတွင်းအခြားမြို့များသို့သွားရောက်နိုင်ပါတယ်. ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အသင်္ချာ ပြု. , 😉
ကနေခရီး ပဲရစ်ဘရပ်ဆဲလ် ရုံအောက်မှာအတွက်ရထားပြီးစီးနိုင်ပါတယ် 1:30 ဇ. မကြာခဏတိုက်ရိုက်ရထားပဲရစ်မှာရောက်လာဘရပ်ဆဲလ်မြို့မှမထွက်’ Gare du Nord နေ့ကိုတလျှောက်လုံး. ဘရပ်ဆဲလ်ကနေပဲရစ်လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ’ Charles de Gaulle လေဆိပ်မှာကျော်ယူ5လေဆိပ်ချောင်းမြောင်းကြိမ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြသောအခါနာရီ.
လေယာဉ်အချိန် – 5:30ဇ
ပဲရစ်ဘရပ်ဆဲလ် မှစ. မီးရထား အချိန် – 1:22 ဇ
အချိန်သိမ်းဆည်း: 4:08 ဇ
ကနေခရီး လန်ဒန်ဘရပ်ဆဲလ် ပဲကျော်ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးနိုင်ပါတယ်2နာရီ. ၏အလျင်မြန်ဆုံးနည်းလမ်း တင်ဆောင် ရထားခရီးသွားဖြစ်ပါတယ်, မကြာခဏတိုက်ရိုက် Eurostar ရထားနေ့ကိုတလျှောက်လုံးလန်ဒန်ရဲ့စိန့် Pancras ဘူတာရုံများတွင်ရောက်ရှိလာနှင့်အတူ. ဘရပ်ဆဲလ်ကနေလန်ဒန် Heathrow လေဆိပ်လေယာဉ်ခရီးစဉ်များကျော်ယူ5လေဆိပ်ချောင်းမြောင်းကြိမ်စဉ်းစားကြသောအခါနာရီ.
ဘရပ်ဆဲလ် မှစ. လန်ဒန်ရထား အချိန် – 2:18 ဇ
လေယာဉ်အချိန် – 5:36 ဇ
အချိန်သိမ်းဆည်း: 3:18 ဇ
ကနေခရီးသွားလာ အမ်စတာဒမ်မှဘရပ်ဆဲလ် ရုံအောက်မှာယူ2ရထားနာရီ. မကြာခဏတိုက်ရိုက်ရထားနေ့ကိုတလျှောက်လုံးအမ်စတာဒမ်ရဲ့ဗဟိုဘူတာမှာရောက်လာ. အမ်စတာဒမ်ရဲ့ Schiphol ဖို့ဘရပ်ဆဲလ်ကနေလေယာဉ်ခရီးစဉ်များ လေဆိပ် လွှဲယူသည်5လေဆိပ်ချောင်းမြောင်းကြိမ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြသောအခါနာရီ.
အမ်စတာဒမ်မှဘရပ်ဆဲလ် မှစ. မီးရထား အချိန် – 1:50 ဇ
လေယာဉ်အချိန် – 5:05 ဇ
အချိန်သိမ်းဆည်း: 3:15 ဇ
ဘရပ်ဆဲလ်ကနေလိုင်ယွန်မှခရီးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ကြာမြင့် 3:30 ဇ. သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလျင်မြန်ဆုံးနည်းလမ်းရထားခရီးသွားဖြစ်ပါတယ်, မကြာခဏတိုက်ရိုက်ရထားနေ့ကိုတလျှောက်လုံးလိုင်ယွန်အတွက်ရောက်ရှိလာသောနှင့်အတူ. ဘရပ်ဆဲလ်ကနေလိုင်ယွန်မှလေယာဉ်ရုံအောက်မှာယူ6နာရီတဲ့အခါမှာလေဆိပ်အကူးအပြောင်းနှင့်အချိန်စောင့်ဆိုင်းပါဝင်သည်.
လိုင်ယွန်မှဘရပ်ဆဲလ် မှစ. မီးရထား အချိန် – 3:29 ဇ
လေယာဉ်အချိန် – 5:50 ဇ
အချိန်သိမ်းဆည်း: 2:21 ဇ
ဒါဟာကိုယ့်ကိုကျော်ကြာ3ဘရပ်ဆဲလ်ကနေ Frankfurt မှရထားဖြင့်ခရီးသွားလာနာရီ. တိုက်ရိုက်ရထားနေ့ကိုတလျှောက်လုံးမကြာခဏ Frankfurt မြို့သို့ရောက်ရှိ. နှိုင်းယှဉ်လျှင်, ဘရပ်ဆဲလ်ကနေလေယာဉ်ခရီးစဉ်မှ Frankfurt လွှဲယူသည်5လေဆိပ်အကူးအပြောင်းအချိန်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ခေါ်ဆောင်သွားသောအခါနာရီ.
Frankfurt ဖို့ဘရပ်ဆဲလ် မှစ. မီးရထား အချိန် – 3:05 ဇ
လေယာဉ်အချိန် -5:15 ဇ
အချိန်သိမ်းဆည်း: 2:10 ဇ
ပြင်သစ်တွင်ခရီးသွားများ၏အမြန်ဆုံး mode ကိုကဘာလဲ:
အဘယ်သူသည်ပြင်သစ် LOVE ပါဘူး? ကျနော်တို့ပြင်သစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းများအပေါ်မရေမတွက်နိုင်သောဘလော့ဂ်ကျမ်းစာ၌ရေးထားတော့. မှ ပဲရစ်ကနေ Nice မှရထားဖြင့်ခရီးသွားလာမှုအတွက်အကြံပေးချက်များ to Where you can ပြင်သစ်အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်သစ် fries ရှာတွေ့ သို့မဟုတ် Michelin စတားစားသောက်ဆိုင် ပြင်သစ်တွင်သင်သည်ပိုနှစ်သက်ပါလျှင်. အများအားဖြင့်, သငျသညျတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးအဲဒီမှာရဖို့ဂုဏ်နချင်နေ! အဲဒီမှာရရန်အမြန်ဆုံးလမ်း? သင်တန်း၏ရထား!
မီးရထား ပြင်သစ်တွင်ခရီးသွားပြင်သစ်တွင်အခြားမြို့များမှပဲရစ်မြို့ကနေသွား၏ထိရောက်မှုအရှိဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. Travel from Paris to the south of France–albeitabit pricey–is best done by train; လေယာဉ်ပျံများနှင့်ရထားစျေးနှုန်းများပုံမှန်အားဖြင့်နှိုင်းယှဉ်များမှာ, ဒါပေမဲ့ ရထားခရီးသွားတစ်ဦးလုပ်ရတဲ့တာလျော့နည်း.
ဘတ်စ်ကားအားဖြင့်ခရီးသွားလာသို့မဟုတ်စီး-ရှယ်ယာစျေးနှုန်းချိုသာပေမယ့်, ယူမယ်လို့နာရီပမာဏကိုပဲလက်တွေ့ကျတဲ့မဟုတ်ပါဘူး. ဥရောပမှာခရီးသွားများ၏အမြန်ဆုံး mode ကိုရထားနဲ့အမြဲဖြစ်ပါသည်, နှင့်ပြင်သစ်န်းကျင်ရတဲ့အဘယ်သူမျှမခြားနားသည်!
အမ်စတာဒမ်ကနေပဲရစ်ခရီးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးနိုင်ပါတယ် 3.5 နာရီ. ခရီးသွားများ၏အမြန်ဆုံး mode ကိုတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် မြန်နှုန်းမြင့်ရထား, မကြာခဏတိုက်ရိုက်ရထားနေ့ကိုတလျှောက်လုံးအမ်စတာဒမ် Centraal ဘူတာမှာရောက်ရှိလာနှင့်အတူ. ပဲရစ်ကနေလေယာဉ်ခရီးစဉ်များ’ Charles de Gaulle လေဆိပ်မှာအမ်စတာဒမ်ရဲ့ Schiphol လေဆိပ်မှခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ယူ4Terminal ကိုချောင်းမြောင်းကြိမ်စဉ်းစားကြသောအခါနာရီ.
ပဲရစ်အမ်စတာဒမ်ကနေရထား အချိန် – 3:26 ဇ
လေယာဉ်အချိန် – 4:05 ဇ
အချိန်သိမ်းဆည်း: 0:39 ဇ
သင်ရုံကျော်အတွင်းဗြိတိန်နှင့်ပြင်သစ်မြို့တော်များအကြားခရီးဖြည့်စွက်နိုင်ပါတယ်2နာရီ. ခရီးသွားများ၏အမြန်ဆုံး mode ကိုစိန့်နေတဲ့မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားဖြစ်ပါသည်. Pancras ဘူတာ. သငျသညျပဲရစ်ရောက်ရှိလာမကြာခဏတိုက်ရိုက်ရထားကိုတွေ့လိမ့်မည်’ Gare du Nord နေ့ကိုတလျှောက်လုံး. ကနေလေယာဉ်ခရီးစဉ်များ ပဲရစ်မှလန်ဒန် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ယူ4လေဆိပ်ချောင်းမြောင်းကြိမ်စဉ်းစားကြသောအခါနာရီ.
ပဲရစ်မှလန်ဒန်ကနေရထား အချိန် – 2:16 ဇ
လေယာဉ်အချိန် – 3:57 ဇ
မီးရထား ခရီးသွားနယ်သာလန်နိုင်ငံတယောက်ကိုတယောက်မြို့မှရဖို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. Prices are relatively inexpensive as you can bookaticket through the Save A Train website အမ်စတာဒမ်ကနေရော့တာဒမ်မှတွေအကြောင်းများအတွက် 15 အဆိုပါဟိဂ်မှယူရိုနှင့်အမ်စတာဒမ် (den Haag ဗဟို) ပတ်ပတ်လည်များအတွက် 11 ယူရို.
ရထားများကအမ်စတာဒမ်ကနေ Dusseldorf မှခရီးသွားခြင်း:
ဒါဟာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ကြာမြင့်2ရထားအမ်စတာဒမ် Dusseldorf အကြားသွားလာနာရီ. မကြာခဏတိုက်ရိုက်ရထားနေ့ကိုတလျှောက်လုံးအမ်စတာဒမ်ဗဟိုဘူတာရုံမှာရောက်လာ. Dusseldorf ကနေအမ်စတာဒမ်ရဲ့ Schiphol လေဆိပ်လေယာဉ်ခရီးစဉ်များကျော်ယူ3နာရီ.
အမ်စတာဒမ်ကနေ Dusseldorf မှရထား အချိန် – 2:13 ဇ
လေယာဉ်အချိန် – 3:10 ဇ
အချိန်သိမ်းဆည်း: 0:57 ဇ
တောလည်ရာမုသာမ! ငွေစုကိုမိမိတို့အဘို့မပြောတတ်အချိန်! The quickest mode of travel in Europe is by Train. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကူးအပေါ်ဦးခေါင်းကို တစ်ဦးကရထားဘ်ဆိုဒ်ကို Save အကောင်းဆုံးကိုစျေးနှုန်းတွေကိုရှာဖွေရန်, စက္ကန့်အတွင်း!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fquickest-mode-travel-europe%2F- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#airtravel #ပျံ #mode of travel Eurostar trainjourney ရထားခရီးသွား ရထားခရီးစဉ်